प्रधानमन्त्रीको विद्वताको कुरा गर्दा साथीहरू... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
प्रधानमन्त्रीको विद्वताको कुरा गर्दा साथीहरू हाँसे, अर्थमन्त्रीको विद्वतामा त शंका छैन: प्रदीप गिरि ‘गहुँ र धानको फरक नबुझ्नेहरू विगतमा अर्थमन्त्री भए’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरिले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको प्रशंसा गरेका छन्।
ओलीले १४ वर्षसम्म जेल बस्दा अध्ययन गरेकोले प्रधानमन्त्रीमा विद्वता भएको केही समयअघि संसदमा चर्चा गरेका गिरिले मंगलबार प्रि-बजेट छलफलमा भाग लिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाको विद्वताको पनि चर्चा गरे।
‘प्रधानमन्त्रीको विद्वताको चर्चा गर्दा मेरा पार्टीका साथीहरू हाँस्नुभयो,’ सांसद गिरिले भने, ‘अर्थमन्त्रीको विद्वतामा त निश्चय नै शंका छैन। अनुभवमा पनि विद्वतामा पनि शंका छैन। यी कुरा मैले इमान्दारीपूर्वक नै भनेको हुँ।’
उनले विकासका मोडलबारे संसारभर बहस भइराखेको बताए। बजारको सर्वोच्चताले व्यक्ति र राज्यका बीचमा सम्पन्नताको खाल्डो झन् चाक्लो बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ। सरकारलाई प्राथमिकतामा ध्यान दिन पनि उनले आग्रह गरे।
‘वृद्धिदर र उच्च समानता तथा सामाजिक न्यायसँगसँगै जान सक्दैन, प्राथमिकतामा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने।
मुलुकको अवस्थालाई ध्यान दिएर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका उनले अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त र बहसतिर मात्रै लाग्न नहुने बताए।
अर्थमन्त्रीको पद विज्ञताको पद नभएको गिरिको भनाइ छ। ‘विदेशमा पढेर आएका, पिएचडी गरेका तर नेपालको हकमा गहुँ र धानको फरक नबुझ्ने, प्याजलाई पानी चाहिन्छ/चाहिँदैन? आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन? भन्ने कुरा भन्न नसक्ने मानिसहरू हाम्रो सरकारको पालामा मन्त्री भए,’ उनले भने।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३१, २०७६, २३:१६:००